Ingqungquthela yoFakazi izobanjelwa eThekwini | News24
Ingqungquthela yoFakazi izobanjelwa eThekwini
KULINDELEKE izindimbane zamalungu ebandla loFakazi baka Jehova engqungqutheleni yomhlaba wonke ezoba senkundleni yezemidlalo iMoses Mabida kusukela ngomhlaka 09 kuze kube umhlaka 11 September 2016.
Lomhlangano wamalungu ebandla uyingxenye yochungechunge lwemihlangano yalelibandla eqale ngomhlaka 20 May kuwo lonyaka kwamanye amazwe emhlabeni wonke.
Lemihlangano iqale eMelika kanye nakwamanye amazwe omhlaba lapho bekubuthene khona amalungu alelibandla edumisa.
Esifundazweni saKwaZulu-Natal kulindeleke izinkulungwane zabalandeli balelibandla ezilinganiselwa ku 35 000 zibuthana enkundleni yezemidlalo eMoses Mabida zizodumisa.
Isiqubulo salonyaka sithi,”Hlala uqotho kuJehova” nokuhloswe ngaso ukugqugquzela abantu emhlabeni wonke ukuthi bagcine izimiso zika Nkulunkulu.
Uhlelo luzobe lwenziwa ngezilimi ezintathu okuyisiZulu isiNgisi nolimi lwezandla ngesikhathi esisodwa.
Kulindeleke kube nezethulo ezilungiselelwe ezingamavideo angu 35 kanye nemifanekiso eyiziqephu ezimfishane ezimbili ezizodlalwa ngoMgqibelo nangeSonto.
UMnuz Trevor Lee ongomunye ohlela lomhlangano ozobe useThekwini uthe:”Sikholwa ngokuqinile ukuthi ukuba qotho kubalulekile kubudlelwano obunempilo. Umhlangano walonyaka uthinta kakhulu izinto ezizosiza abantu ukuze bakwazi ukwakha ukuxhumana okuqinile nabangani kanye namalungu emindeni yabo. Kodwa ngaphezu kwakho konke siqinisa kakhulu ubudlelwano noNkulunkulu. Siyaqinisekisa ukuthi bonke abazobe bekhona bazowujabulela lomhlangano.”
Ngeminye iminingwane mayelana nalomhlangano kungathintwa uM Hlongwane kule nombolo 082 462 5012 noma uvakasheke ku www.jw.org.